प्रधानमन्त्रीसँग रमेश खरेलको माग, तपाईको पारिश्रमिक होइन, द’लाल र तस्क’रबाट मुक्ति चाहन्छौं…चित्तबुझे सेयर गर्नुहोस् । – yuwa Awaj
प्रधानमन्त्रीसँग रमेश खरेलको माग, तपाईको पारिश्रमिक होइन, द’लाल र तस्क’रबाट मुक्ति चाहन्छौं…चित्तबुझे सेयर गर्नुहोस् ।
कार्तिक ३०, २०७७ आइतबार 3
काठमाडौं : पूर्व डिआईजी तथा अभियान्ता रमेश प्रसाद खरेलले राज्यलाई प्रधानमन्त्रीको पारिश्रमिकभन्दा भ्रष्टा’चारबाट मु’क्ति चाहिएको बताउँछन् । उनले भनेका छन्–
प्रम ओलीको ६ महिनाको पारिश्रमिक को-भिड रो’कथाम, नियन्त्रन तथा उपचारमा खर्च गरिने खबर आएको छ । नेपाली जनतालाई तपाईको पारिश्रमिक चाहिएको छैन । हामी तपाईले संरक्षण गरे्का भ्रष्ट’चारी, विचौ’लीया , त’स्कर , दला’ल , लम्प’सारबाद , भाग’बन्डा, बे’थिति आदीबाट मु’क्ति चाहन्छौ । जागौ नेपाली जागौ ।
प्रधानमन्त्री ओली सच्चिनुपर्ने उपाध्यक्ष वामदेवकाे सुझाव !
काठमाडाैँ, ३० कार्तिक । सत्तारूढ नेकपाभित्र सतहमै देखिएको विवादकाे समाधानबारे प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग सुझाव माग्नुभएकाे छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बाेलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष गौतमसँग आइतबार बिहान छलफल गर्नुभएकाे बालुवाटार स्राेतले जनाएकाे छ । स्राेतका अनुसार उपाध्यक्ष गौतमले पार्टी वि’वाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले सच्चिनुपर्ने सुझाव दिनुभएकाे थियाे ।
अहिलेको अवस्थामा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा झण्डै एक घण्टा छलफल चलेकाे बताइएकाे छ । छलफलमा अर्थमन्त्री एवं पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्याे ।
साे क्रममा प्रधानमन्त्री अलिकति सच्चिएर पार्टी निर्णय मान्नेबित्तिकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राखेको राजनीतिक दस्ता’वेज स्वतः फिर्ता हुने वा आफै गौण हुने उपाध्यक्ष गाैतमले सुझाव दिनुभयाे । उहाँले विवा’दकाे समाधानका लागि सचिवालय बैठकमा नै छलफल गर्नुपर्नेमा जाेड दिनुभएकाे बताइएकाे छ ।
Prevकतारका राजकुमार शेख मोहम्मद भन्छन – नेपाल विश्वकै एक सुन्दर देश हो !
Nextनायक नाजिर भन्नुहुन्छ : आमाबाट पाएको संस्कार र संस्कृति मानिरहेको छु…हेर्नुहोस् ।